मंसिर १७, डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको डेउडापछिको दोस्रो ठूलो खेल (नाच) भुँवाखेल सोमवार शुरु भएको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिका–५, बागठाटा गाउँबाट उक्त खेल शुरु भएको हो । करीब पाँचदेखि सात दिनसम्म खेल खेलिने भएको सो वडाध्यक्ष मदन भण्डारीले बताए । उनका अनुसार डोटी राजाका पालादेखि भुवाँखेल खेल्न...
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४ भगतपुरमा दलित छात्रावास निर्माण अलपत्र परेको छ । सुदूरपश्मिाञ्चल दलित छात्रावास समितिले शुरू गरेको छात्रावास भवनको निर्माण बजेट अभावका कारण सम्पन्न हुन सकेको छैन । उक्त छात्रावास भवन निर्माण २०७२ सालमै शुरू भए पनि हालसम्म पूरा हुन न...
धनगढी । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा कैलालीमा पूर्वाधार विकास निर्माणमा रू. ७७ करोड खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, धनगढीले बताएको छ । सो अवधिसम्ममा विकास बजेटको ७ दशमलव ६४ प्रतिशत भएको छ । चालू आवका लागि कैलालीको विकास बजेट रू. १० अर्ब १८ करोड रहेकोमा प्रगति ७७ करोड मात्र देखिएको क...
वित्तीय पहुँच सुनिश्चितताका लागि वित्तीय सम्मेलन : मन्त्री बोहरा
मंसिर १६, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा मंसिर २० गते वित्तीय सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ । वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता मुल नारासहित धनगढीमा एकदिने सम्मेलनको आयोजना गरिन लागेको हो । सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री झपटबह...
कञ्चनपुर–कैलालीमा धान उत्पादन बढ्दो
महेन्द्रनगर (अस) । कैलाली र कञ्चनपुरको धान उत्पादनमा वर्षेनि वृद्धि भएको छ । सिँचाइको सुविधा र रासायनिक मलको प्रयोगका कारण धान उत्पादन बढिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले जानकारी दिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख रामचन्द्र भट्टले चालू आर्थिक वर्षमा कञ्चनपुरमा प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ९ मेट...
मंसिर १२, धनगढी । उत्तर/ दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत मोहनापुल–अत्तरिया सडक योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । २४ महीनाभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने सम्झौताअनुरुप रू.१ अर्ब ६८ करोडमा निर्माणको जिम्मा लगाइएपनि चालू आवको मंसिर पहिलो सातासम्म ५५ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको...
कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा विकासे बजेट लिन समेत ढिलाइ
महेन्द्रनगर (अस) । कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरूले प्राप्त विकास बजेटका लागि योजनाको माग नै नगरेको पाइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कञ्चनपुरले तत्कालीन जिल्ला विकास कोष सञ्चालन निर्देशिका अनुसार जिल्लाका ९ ओटै स्थानीय तहलाई योजना माग गर्न प्रस्ताव पठाएको थियो । तर बेलाडाँडी गाउँपालिका बाहेक अन्य स...
धनगढीमा रू. १३ करोडमा खानीपानी योजना बन्दै
धनगढी (अस) । धनगढी उपमहानगरपालिका–१२ जुगेडा डिगाउँमा करीब १३ करोड रुपैयाँ लागतमा बृहत् खानेपानी योजना बनाइने भएको छ । आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ लागतमा उक्त आयोजना बनाउन लागिएको हो । धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले मंगलवार उक्त आयोजनाको शिलान्यास ग...
धनगढी । कैलाली–कञ्चनपुरमा खानेपानीका दर्जनौं योजना रहे पनि बजेट अभावले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट वर्षेनि खानेपानी योजना थपिने गरे पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको हो । कैलाली र कञ्चनपुर कार्यक्षेत्र रहेको भौतिक पूर्...
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश पोर्टल बनाइए पनि दैनिक गतिविधिका सूचना अपडेट हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ठूलै लगानी गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतको वेबसाइट निर्माण गरे पनि केही मन्त्रालयको मात्र सूचना सामान्य रूपमा राखिने गरेको पाइएको हो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा स...